Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal ka dhacay Meel ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado – STAR FM SOMALIA
Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaal ka dhacay Meel ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado
Waxaa shalay dagaal uu ka dhacay bar koontarool ay ku sugnaayeen Ciidamada maamulka Galmudug lagana ilaaliyo garoonka Diyaaradaha magaalada Cadaado, kadib markii goobtaasi ay weerareen maleeshiyaad hubeesan.
Sida aan Wararka ku heleyno Maleeshiyaad hubeesan uu watay nin ka ganacsada Jaadka ayaa weeraray bar koontarool oo kutaala meel ku dhaw garoonka Diyaaradaha Cadaado, waxaana halkasai ka dhacay dagaal daqiiqado socday.
Maleeshiyadaka hubeesan ee ka amar qaata Ganacsadaha Jaadka keena ayaa la sheegay in ay ka caroodeen is qab qabsi iyo is fahmi waa ka dhashay Diyaarad jaad siday oo ka degtay Garoonka Diyaaradaha magaalada Cadaado.
Xaalada magaalada Cadaado ayaa saakay ah mid dagan, waxaana socda dadaalo lagu doonayo in xal looga gaaro dagaalkii shalay ka dhacay meel ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado , taa oo sababtay in garoonka uu saacado xirmo.
Maamulka Galmudug ayaan wali ka hadlin iska hor imaadka ka dhacay meel ku dhaw Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado, ciidamada iyo maleeshiyaadka dagaalamay ayaana la sheegay in ay kasoo wada jeedaan Magaalada Cadaado.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo gaaray magaalada Khartoum ee dalka Sudan
Faah Faahin: Duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ka geysteen Koofurta Somaia